+95925815995 , +95926819557,
862, Kyansisthar Street, 10 Mile, Sawbwargyigone Qtr, Insein Township, Yangon.
Perfect Real Estate Group
ခြံအမှတ်(၉) ယောမင်းကြီးလမ်း ဒဂုံမြို့နယ်
Myanmar Jewel Land2( မြန်​မာရတနာ​မြေ ) +959265819559, +95926819557,
တိုက်​ C1၊ အမှတ်​(02-01)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ သုဝဏ၊ စု​ပေါင်းမှတ်​တိုင်​​ရှေ့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​၊ ရန်​ကုန်​မြို့။
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 14
Myanmar Jewel Land3( မြန်​မာရတနာ​မြေ ) +959265819559, +95926819557,
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 53
Room-1205, 12F, Olympic Tower, Corner of Bo Aung Kyaw Rd. and Maha Bandula Rd., Kyauktada T/S, Yangon
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 15
GOLDEN HOUSE REAL ESTATE SERVICE
အမှတ် ၈၀/၂၁ ရပ်ကွက်|အဝေရာလမ်း| ၂၀ ကုန်တိုက်မှတ်တိုင်အနီး|တောင်ဒဂုံ (ရန်ကုန်)
Htun Real Estate Services
အမှတ်(၃၃၁)၊ သုဓမ္မာလမ်းမကြီး၊ (င)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
No.2, East Myoe Pat Street, South Sayarsan Quarter,Bahan, Yangon , Myanmar.
Global Real Estate 09-43018444,
အမှတ် ၁၀၁၊ အခန်း ၁၀၊ ဒုတိယထပ်၊ ကံလမ်း၊ လိူင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
Pristine Global Development Co.Ltd
09-260443918 ,09-450004466, 09-6503088,,09403702441, 09972105007,
No.41, Boseinhman Rd. Tarmwae Township, Yangon.
09250008127, 09254146420, 09254146421,09975705161
No.42,2nd fl,B.1,Yangon Insein Road.(Near Hledan Point).Kamayut Township.Yangon, Myanmar.
01-524284, 01-2305002, 09-43084226, 09-5164370,
အမှတ်(၁၁၆)၊ အင်းစိန်လမ်း၊(၉) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။
09-428319225, 09-73244725, 01-516122,
အမှတ်(၆၉/က)၊ အခန်း(၃၃)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ သုခမှတ်တိုင်နှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား၊ ရန်ကုန်မြို့။
S.S.S Construction Co.,Ltd.
No.11, Bahan 1st Street, Myoma Quarter, Bahan Township, Yangon
NGWG AEIN SAN (Real Estate & General)
09-43041567, 09-73067895, 09-43207299, 09-42074302,
No.90/A, 3rd Floor, 14th Street (Middle Block), Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.
Yellow Link Real Estate
09-5135194, 09-31340859, 01-401339,
No.97, 2nd Floor, U Chit Mg Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
SKK Family Construction Co.,Ltd
No.184,KyunShweMyaing St,23 Quater,Thuwana,Thingangyun Tsp,Yangon.Myanmar.
< 1234567 89> Last Useful Links